Akhriso: khudbaddi Furitaanka kal-fadhiga koowaad ee Baarlamaanka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Akhriso: khudbaddi Furitaanka kal-fadhiga koowaad ee Baarlamaanka
Akhriso: khudbaddi Furitaanka kal-fadhiga koowaad ee Baarlamaanka
Madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furayay kal-fadhiga koowaad ee Baarlamaanka 10- naad ee Soomaaliya
Xubnaha Golaha Shacabka
Marti sharafta kale
Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan Xildhibaanadii I soo doortey, waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa in ammaanadii aad noo dhiibteen aanu idiin ilaalin doonno, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu nagu garab galo oo noo fududeeyo Aamiin.
Hadaba muddada xilhaynta Baarlamaanka 10aad oo afar sano ah waxaa ina horyaala hawlahan soo socda oo aad u culus ,oo badankooda ay ahayad in Baarlamaankii 9aad qabto, kaliyana looga bixi karo hadii afarta sano habeen iyo maalinba aan gabi ahaan wada shaqeyno oo hayaadba hayaadda kale garabsiiso sababtoo ah inaga oo dhan ayaa qaadney masuuuliyadda in dalkan la gaarsiiyo (Hal Qof iyo Hal Cod sanadka 2020) qof walba ha ogaado in dadku inala xisaabtamayo.
Dhameystirka Dib U- Eegista Dastuurka .
Dhamaystirka shuruucda Fadaraalaynta.
Matalaadda Dadweynaha – waa laf dhabarta Dimoqraadiyadda sidaa awgeed waa in aan dardar galino dhamaystirka Matalaadda Dadweynaha. Ila hada waxaa la ansaxiyey kaliya Sahrciga Axsaabta laakiin wixii shuruuc ah ee la xiriira sharcigan wali lama taaban. Waxaa ka mid ah Sharciga doorashadda, Diiwaangalinta dadweynaha, sharciga Jinsiyadda IWM.
Dhamaystirka shuruucda hortabinta leh ee dastuurku dalbayo oo dhan 22 sharci sida ku cad Jadwal 1(D) iyo wixii kale ee shuruuca ee uu tilmaamay Dastuurka KMG.
Dardargalinta Hindiso sharciyeedyadda Xukuumaddu keeni doonto oo fara badan koobayana Wasaaradaha kala duwan ee Xukuumadda.
Previous articleFaallo: Raysal wasaare Xasan Cali khayre Hawsha ug weyn waa inuu keeno xukumad wada shaqeyn karto
Next articleMaclimiin laga Af-duubtay Xeryaha Dhadhaab